Fitobiana | Tsidiho i Hultsfred
Safidio ny tianao indrindra, amboary ny karajia ary mankanesa aty!
Raha mandeha miaraka amin'ny karajia, motera na mikasa ny hitoby mandritra ny fotoana ijanonanao ianao, dia misy toby maro samihafa - akaikin'ny farihy, mahafinaritra ary afovoany.
Tady rojo zanak'omby
Toeram-piantsonana ao amin'ny zaridainan'ny Kalvkätte misy fidirana amin'ny rano, WC ary fitoeram-pako.
Ny fetin'i Hultsfred
Eo afovoan'ny afovoan'ny farihy sy ny fidirana an-tsehatra, toerana fijanonana efatra no misy ny gara. Malalaka hijoro indray alina. Raha mila serivisy fitobiana ianao dia miangavy mba hijery ny camping Hultfred
Toerana fitobiana voajanaharin'i Hesjön
Ny avaratry Målilla dia tobin'ny natioran'i Hesjön. Misy toerana fijanonana ho an'ny caravans sy tranony finday, ary koa tranokala misaraka. Fiantsonan-tànana amin'ny tanana. Avy amin'ny fiantsonan'ny fiara dia misy làlana azo namboarina
Toerana toby natiora Stora Hammarsjön
Miorina tsara eo amin'ny faritra iarovana ny jono sy ny jono Stora Hammarsjön Eo ivelan'i Hultsfred no misy ny faritra iarovana sy ny jono an'i Stora Hammarsjön. Ao amin'ny Stora Hammarsjön, sahabo ho 10 km, misy iray